Rainbow moonstone zvinoreva uye kuporesa zvivakwa - vhidhiyo
Rainbow moonstone zvinoreva uye kuporesa zvivakwa. Bhuruu sheen mutengo wemwedzi.
Tenga chaiwo muraraungu mwedzi wemwedzi muchitoro chedu
Rainbow moonstone vs mwedzi
Moonstone ndeye orthoclase feldspar. Iyo ine makemikari akaumbwa KAlSi3O8 (potasium, aluminium, silicon, oxygen). Moonstone inogona kuwanikwa mumarudzi akasiyana siyana anosanganisira chena, kirimu, grey, sirivheri, pichisi, nhema. Ipo ivo vachiratidzira adularescence, haisi yakajeka mavara sezvaungawana ne painbow moonstone.
Rainbow moonstone ndeye plagioclase feldspar. Iyo ine makemikari anoumba (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (sodium, calcium, aluminium, silicon, oxygen). Iyi ndiyo imwechete yemakemikari e labradorite. Kunyangwe paine zita rekuti moonstone, iri iri chena labradorite. Ndicho chikonzero nei dombo iri riine labradorescence phenomena iyo yatinowana mu labradorite. Inowanzo iine dema tourmaline inclusions.
Kufanana nemamwe matombo efaeldspar akadai amazonite uye labradorite, inonzwisisika kumakemikari, abrasives, kupisa, acids uye ammonia. Usambofa wakashandisa chinodziya, inopisa mvura kana yekuchenesa emagetsi neichi dombo. Shandisa sipo yakapfava uye tembiricha yemukati pombi yemvura nejira nyoro kuti uchengetedze kubwinya kwedombo.
Madepositi ari muCanada, Australia, India, Madagascar, Mexico, Myanmar, Russia, Sri Lanka uye USA.
Rainbow moonstone zvinoreva uye kuporesa zvivakwa
Iyo dombo rinofungidzirwa kuti rinounza mwero, kuwirirana uye tariro ichiri kuwedzera kugona, tsitsi, kutsungirira uye kuvimba mukati. Zvinotendwa kubatsira kusimbisa intuition uye psychic kuona, kunyanya kutipa zviratidzo zvezvinhu izvo zvisiri pachena pachena. Nekuti zvinotibatsira kunzvenga tunnel kuona, isu tiri kukwanisa kuona zvimwe zvingabvira. Zvakafanana nemheni yekurudziro inouya kana isu takasununguka uye takanyarara. Kana isu tikapfeka dombo iri, kukurudzira kunochinja hupenyu kunogona kuitika zvakanyanya uye kazhinji.
Chii chinonzi rainbow moonstone chakanakira?
Iro dombo rinofungidzirwa kuti rinounza mwero, kuwirirana uye tariro ichiri kuwedzera kugona, tsitsi, kutsungirira uye kuvimba mukati. Zvinotendwa kubatsira kusimbisa intuition uye psychic kuona, kunyanya kutipa zviratidzo zvezvinhu izvo zvisiri pachena pachena.
Iwe unochengeta sei muraraungu mwedzi?
Kufanana nematombo anokosha, matombo emwedzi haana kusimba uye anofanirwa kutarisirwa nekungwarira. Kuchenesa, ingoshandisa mvura inodziya nesipo yakapfava kuchenesa. Unogona kushandisa bhurashi rakapfava kana zvichidikanwa. Ipapo, ingooma nejira nyoro
Ndeupi munwe waunopfeka muraraungu wemwedzi wedombo pamhete?
Kuti uwane zvakanakira kubva padombo iri, kuripfekedza munhete yesirivha ndiyo yakanyanya kunaka nzira. Kunyangwe nyeredzi inokurudzira kuti ibwe remwedzi rinonyanya kupfekwa pachigunwe chidiki cheruoko rwerudyi.
Iwe unogona sei kuziva kana muraraungu werin'i moonstone iri yechokwadi?
Iro dombo rinogona kuzivikanwa nehunhu hwaro hweadularescence, iyo inoratidzika senge yemukati sosi yechiedza kana sheen. Inogona kusiyaniswa ne orthoclase moonstone neyakawedzera refractive index uye yakakwira yakatarwa giravhiti.
Muraraungu mwedzi wakaita zvisikwa?
Ehe iri isina mavara labradorite, yakabatana kwazvo feldspar mineral ine sheen mune akasiyana mavara eresidescent. Kunyangwe iri hunyanzvi kwete dombo remwedzi, rakaenzana zvakakwana zvekuti bhizimusi rakazvigamuchira sedombo mune raro chairo.
Zvakaoma sei muraraungu mwedzi?
Iyo ine kuomarara kwe6 kusvika 6.5, iyo ingaite senge yakapfava kuenzanisa nematombo anokosha, asi yakaoma zvakakwana kuti ipfeke.
Chii chinonzi muraraungu bhuruu yemwedzi mutengo?
Zvinhu zvinochinja, zvichena kana zvine ruvara rwemuviri runofadza uye adularescence, zvakajairika pamusika uye zvinoraira mitengo ine mwero.
Tenga murarabungu chaiwo wemwedzi mune yedu yekutengesa gem